ခင်မင်းဇော်: December 2007
Benazir Bhutto သေဆုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
ဘင်နာဇာဘူတို လုပ်ကြံခံရလို့ သေပြီတဲ့။
ဒီသတင်းကြားခါစက မင်သက်မိသွားတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်မှာ ပါကစ္စတန်ရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ။ သူက ဟားဗတ်တို့ အောက်စဖို့တို့မှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရသူ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ထက်မြက်မှုကို သူ့အဖေ ကြိုးပေး ခံရပြီးနောက် ၁၁ နှစ်အကြာ ၁၉၈၈ မှာ ကမ္ဘာက မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့လိုက်ရပြီ။
၁၉၉၀မှာ သူမရဲ့ အောင်မြင်မှုများကို လာဘ်စားမှုဆိုတဲ့ ပြစ်ဒဏ်နှင့် အစိုးရဖျက်သိမ်းခဲ့ပြန်…
ဒါမဲ့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူမ ဦးဆောင်တဲ့ပါတီကပဲ အနိုင်ရခဲ့ပြန်…
၀န်ကြီးချုပ် နောက်တခါ ထပ်ဖြစ်ပြန်….
ဒီတခါမှာတော့ သမ္မတက လက်မခံချင်တော့ပဲ လာဘ်စားမှုနဲ့ တရားစွဲ အစိုးရကို ဖျက်သိမ်း တပည့်ကို ၀န်ကြီးချုပ်ခန့်ပစ်လိုက်တော့တယ်။
ယူအေအီးလို့ ခေါ်တဲ့ ယူနိုက်တက်စော်ဘွားနိုင်ငံမှာ ၇ နှစ်ကျော် နေထိုင်ရင်း …
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေအများကြီး အဆင့်ဆင့် ကြားကနေ သူမရဲ့ ပြည်တော်ပြန် ခရီးစ စချင်းမှာ လူပေါင်း ၁၄၁ ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။
ခုတော့ ၁၉၈၈ က ကမ္ဘာ့အလှဆုံး အမျိုးသမီး ၅၀ ထဲမှာ ပါခဲ့ဖူးတဲ့..
နိုင်ငံတခုရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် တာဝန် ၂ ကြိမ်တိုင်ရရှိထမ်းဆောင်ဖူးတဲ့…
ကလေး ၃ ယောက်ရဲ့ မိခင် …
ခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအများဆုံးရရှိဖို့ အလားအလာ အကောင်းဆုံး …
ပါကစ္စတန်က စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို အဆုံးသတ်ပေးမယ့် မျှော်လင့်ခြင်းရောင်ခြည်….
သူမကတော့ သူမဖခင်ဘေးက မြေကွက်လပ်မှာ ဆိတ်ငြိမ်စွာ လဲလျောင်းသွားခဲ့ပြီ..
ကျမ မျက်စိထဲမှာတော့ ..
သူမ အဖေ ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခံရတာ…
သူမ သေနတ်နဲ့ ဗုံးနဲ့ အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်လုပ်ကြံခံရတာ……..
ခု သူ့ရဲ့ ၁၉ နှစ်အရွယ်သားလေးက သူမပါတီရဲ့ ဥက္ကဌ လုပ်မယ်တဲ့…
အိန္ဒိယ က အင်ဒရာဂန္ဓီ…
သူမရဲ့သားငယ် ဆန်ဂျေး ဂန္ဓီ..
နောက်သားကြီး ရာဂျစ်ဂန္ဓီ… သူတို့တွေ ရဲ့ သေဆုံးခဲ့ရခြင်းတွေ…
သေဆုံးခြင်းတွေမှာ အဓိပါယ် ရှိမှာပါ….
နိုင်ငံကို တိုးတက်စေချင်သူတွေ နဲ့ အာဏာကို မက်မောသူတွေကြားထဲက ကွာဟချက်တွေ..
အားလုံးထဲမှာ… ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက်… ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက …
နောက်မတွန့်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ် ထင်ပါရဲ့….
ခုတော့…. သူမ က အေးချမ်းသွားခဲ့လေပြီ…
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီရအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ အာဏာရှင်စံနစ်ကို အကောင်းဆုံး လက်စားချေခြင်းပဲ တဲ့။
ပါကစ္စတန်ပြည်သူ့ပါတီ ခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ်တဲ့ သားဖြစ်သူရဲ့ ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းထဲမှာ သွားလေသူသူ့မိခင် အမြဲပြောနေကျ စကားလေးကို ပြန်ပြောပြခဲ့တာပါ။ သူ့မိခင် ရည်မှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်း အောက်စဖို့ဒ်ကျောင်းတော်သား ၁၉နှစ်အရွယ် လူငယ်လေးက ပြောသွားပါသေးတယ်။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံရေးလောကရဲ့ စစ်အာဏာရှင် တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ဘူတိုမျိုးဆက်ဟာ အဘိုး အမေကနေမှတဆင့် မြေးအထိ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပါပြီ။
ဘာကြောင့်မှန်းတော့ သေသေချာချာ မဝေခွဲတတ်ပေမယ့် ဘင်နာဇာဘူတို သေဆုံးမှုဟာ ကျမရင်ကို တော်တော် မသက်မသာ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ကျမဘာတွေကို ဆက်စပ်စဉ်းစား ပူပန်မိနေတာပါလိမ့်.. ဘုရား ဘုရား မဖြစ်ပါစေနဲ့။ မဖြစ်လာပါစေနဲ့ လို့ (ဒီတခါတော့ မိန်းမဆန်ဆန်) ဆုတောင်းမိယုံမှတပါး ကျမကကော ဘာများတတ်နိုင်ပါဦးမည်နည်း။ ။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 1:13 PM 1 comment:
The form of the struggle is not chosen by the ruled but by the ruler.
ကိုမိုးသီးဘလော့မှာ တင်ထားတဲ့ inside of september movement 2007 ဗွီဒီယိုမှာ ကြည့်လိုက်ရတော့ တုတ်နဲ့ ကိုင်ရိုက်နေတဲ့ စစ်သား ၁၀ ယောက်လောက်ကို ထွက်ပြေးတဲ့ ယောက်ျား မိန်းမ ၁၀၀ လောက်က ပြန်သာချလိုက်ရင် ခုလို တယောက်သေတာကို မြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ လဲနေတဲ့ လူတယောက်ကို အတင်းထပ်ရိုက်နေတာကို ဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်မျိုးတွေနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေနိုင်သလဲ ဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားမရဘူး။ အဲဒီမှာ ပြေးနေတဲ့လူတွေဟာ ငါတို့ ပြန်ချမယ်။ သူချ ကိုယ်ချ၊ သူသေ ကိုယ်သေ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မ၀င်အောင် အကြမ်းမဖက် လူထုလှုပ်ရှားမှု ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကပဲ ထိန်းချုပ်ထားသလား။ စဉ်းစားလေ ကျမစိတ်ထဲမှာ ပြေးသာ ချချင်လေပဲ။ မတရားတာကို ဘယ်လိုမှ ခေါင်းငုံ့ မခံချင်တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာခဲ့တယ်။ ၈၈ တုန်းက အဲလိုစိတ်ဓါတ်နဲ့ပဲ မဆလ တပါတီကို ခံတိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ် တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့တာ။ နောက်လူထု တိုက်ပွဲကို ယုံလို့ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေ ဆင်းပေးခဲ့တာ။ အဲဒီတုန်းက စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာ ကတိတည်မယ်လို့ ထင်တာကိုး။ သူတို့တွေကလည်း လူထု ကို လေးစားလိမ့်မယ် ထင်ခဲ့တာကိုး။
ခုတော့ ကျမက စစ်အုပ်စု ရွေးပေးလိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ၈၈စိတ်ဓါတ်၊ ရွှေဝါရောင်စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ပြည့်ဝ တက်ကြွလို့ ...
ကျမတို့ ရွေးချယ်မဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဟာ အကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့(Terrorism) နဲ့ လားလားမှု မတူဘူးဆိုတာကိုလည်း နားလည်ထားမှ ဖြစ်မယ်။ ကျမပြောတဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီအာဏာရှင်ပြုတ်ကျ ပြီးရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရှိအောင် လုပ်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ချက် ထားတယ်။ ဒါဟာ အနိမ့်ဆုံး လူတိုင်းသုံးတဲ့စကားနဲ့ ပြောပြတာပါ။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးမှာ လူတိုင်းပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်တာလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းထောက်ခံ နေဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က စစ်ကြီး ၂ ခုစလုံးကို ရပ်တန့်စေဖို့အတွက် စစ်ပွဲတွေကပဲ အဆုံးသတ်ပေးခဲ့တာပါ။ ဒါကိုတော့ ငြင်းနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ ဂန္ဓီရဲ့ အကြမ်းမဖက် လမ်းစဉ်အတွက် နေရူးက ဘယ်လိုပေးဆပ်ပေးခဲ့ပါသလဲ။ မင်ဒဲလား တို့ စကားဝိုင်းထိုင်နိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ ANC လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့က ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသလဲ ။ သမိုင်းကြောင်းတွေကို သေချာလေ့လာပြီး နောက်ကွယ်က ပံ့ပိုးမှုတွေရဲ့ အားကို သိဖို့လဲလိုပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ ကျမက နအဖကို တိုက်မှ ရမယ်လို့ ယုံကြည်သူတဦးပါ။ ဘယ်လို တိုက်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျမနားမလည်ပါဘူး။ တိုက်သင့်တယ် တိုက်နေတဲ့လူတွေ တိုက်မယ့် လူတွေကို ထောက်ခံမယ်။ ထောက်ပံ့မယ်။ အကြံကောင်းတွေ ၊ နည်းနာသစ်တွေ လိုချင်တယ်။ အားလုံးဝိုင်းဝန်းရမယ်လို့ ခံယူထားသူပါ။နောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင် အများကြီး ထိခိုက်စရာတွေ ရှိလာတော့မှာမို့ ဒီအကြောင်းတော့ ရပ်လိုက်ဦးမယ်။
ကျမတို့ အင်အားတွေ မသာခဲ့လို့ သူတို့နိုင်နေတာလို့ ယူဆမယ်ဆိုရင် သူတို့ ကို မောင်းထုတ်နိုင်ဖို့ ၊ ကိုယ့်ကျွန် ကိုယ်ပြန်ခံနေရတဲ့ မြန်မာ ပြည်သူတွေကို စစ်ကျွန်ဘ၀က ဆွဲထုတ်ကယ်တင်နိုင်ဖို့၊ အတိုင်းအတာတခုထိတော့ ကျမတို့ စုစည်းညီညွတ်ကြရမယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းကို မဆို ကျမတိ်ု့ အားပေးကြရမယ်။ဒီတခေတ်မှာ ကျမတို့မျိုးဆက် မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင် နောက်မျိုးဆက်တွေက အပြစ်တင်တာ ခံရမယ့်အပြင် ကျမတို့ ရင်သွေးမျိုးဆက်တွေဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာအောက်ချလို့ လူဖြစ်တယ် ဆိုရုံဘ၀မျိုးနဲ့ အသက်ရှင် သွားရတော့မယ်။
ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်နေသူတွေ အသုံးမကျလို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ မျက်နှာငယ်ရတာတွေကို မြင်ရတိုင်း ရင်ထဲမှာ တကယ်မချိပါဘူး။ တကယ်ဆို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ အင်မတန်တော်တဲ့ထက်တဲ့ လူမျိုးတွေပါ။ အုပ်ချုပ်သူညံ့ဖျင်းမှုက နိုင်ငံကို ဆင်းရဲစေတဲ့အပြင် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ထက်မြက်မှုတွေကိုပါ အောက်ဆုံးအဆင့်ကို ဆွဲချလိုက်တာပါပဲ။ တိုင်းပြည်တပြည် တိုးတက်ခေတ်မှီနေဖို့က အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ ထက်မြက်မှုပေါ်မှာ မူတည်တယ်ဆိုတာကတော့ ငြင်းစရာမရှိပါဘူးနော်။ ကျမဆက်ဆံဖူးတဲ့နိုင်ငံခြားသား ပညာတတ်ဆိုတဲ့ လူတချို့ဟာ ကျမလောက်တောင် စည်းကမ်းမရှိ ၊ မသပ်ရပ် ၊ မထက်မြက်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဖူးတော့ ကျမက အဲလိုပဲ မြင်တယ်။ သူတို့အစိုးရကောင်းနေလို့ သူတို့အခြေအနေက ငါတို့ထက်သာနေတာပါလား လို့.....။
နိုင်တဲ့လူက သမိုင်းကိုရေးစတမ်းလို့ ကျမစီဘောက်မှာ နအဖ အောက်ဆွဲတယောက်က ရေးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသမိုင်းဟာ တကယ်တည်တန့်တဲ့ သမိုင်းဖြစ်မလား။ နောက် မျိုးဆက်သစ်တွေက ဒီသမိုင်းကို အပြစ်တင်တာ ခံမလား။ ဒီလိုပါပဲ သမိုင်းမှာ လူဆိုးဖြစ်မလား၊ လူကောင်းဖြစ်မလားဆိုတာကို နောက်မျိုးဆက်တွေက ဆုံးဖြတ်မှာပါ။ ကိုယ်ရေးတဲ့သမိုင်းကို ဖတ်မှာက နောက်မျိုးဆက်တွေဆိုတာကို မစဉ်းစားနိုင်အောင် အသိဥာဏ် နုံနဲတဲ့သူတွေကိုသာ နအဖလို လူမိုက်တွေက စည်းရုံးနိုင်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ သိလိုက်ရတာလဲ ကျေနပ်စရာပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်သတဲ့။ အော် .. တော်တော် ရှော်တဲ့အတွေးတွေပါလား.. လို့ ကျမ တွေးမိသေးတယ်။
တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့လူတွေက ကိုယ့်တိုင်းပြည် တဖြည်းဖြည်းဆင်းရဲလာနေတာကို ကြည့်ရက်သတဲ့။ နိုင်ငံတွင်းက အခြေခံလူတန်းစားတွေ တပါးနိုင်ငံမှာ ကျွန်လို ရုန်းနေရတာကို ကြည့်ရက်သတဲ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ သုံးရင် နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက် လင်းထိန်နေမဲ့အပြင် စက်မှုလုပ်ငန်းတွေလဲ တိုးတက်လာမဲ့ အခြေအနေရှိတဲ့ နိုင်ငံပိုင် ဂတ်စ်တွေကို အောက်ဈေးနဲ့ ရောင်းပြီး သူတို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးစွဲ။ တိုင်းပြည်ကိုတော့ မှောင်ချထား။ အော် ချစ်တတ်ပုံများကတော့.. အောချလောက်ရဲ့။
စစ်တပ်ကလွဲများ ကျန်တဲ့ လူများက နိုင်ငံမချစ်တတ်ဘူးတဲ့ ။ ယူဆနေပုံများ။ ကဲ .. ဒါဆိုလဲ
ဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေ မောင်းထုတ်.. စစ်သားတွေပဲ လုပ်တော့.
ကျောင်းတွေက ဆရာတွေကို အလုပ်ဖြုတ်…. စစ်သားတွေပဲ လုပ်တော့..
အင်ဂျင်နီယာတွေ အကုန်ဖယ်….. စစ်သားတွေပဲ လုပ်တော့…
ဈေးသည်တွေ ကုန်သည်တွေလဲအကုန်ပိတ်ခိုင်း… စစ်သားတွေပဲ လုပ်တော့..
ဆိုက်ကားဆရာ ကားဆရာတွေလဲ အကုန်နားတော့… စစ်သားတွေပဲ လုပ်တော့..
လဖက်ရည်ကော်ဖီ အသုတ်စုံ အကုန်နား…. စစ်သားတွေပဲ လုပ်တော့… ရုံးစောင့် ညစောင့် ဂိုဒေါင်စောင့်…. အကုန်နား …… စစ်သားတွေပဲ လုပ်တော့..
ဘုန်းကြီးတွေ လဲ မရှိစေနဲ့ ….. စစ်သားချင်းပဲ ရှိခိုးတော့ ( ကျမတို့ကတော့ ရှိမခိုးနိုင်ဘူးကိုး) ဟိဟိ…. စစ်သား ၄ သိန်းကို အကုန်လုပ်ဖို့ လွှဲပေးလိုက်တော့.. သူတို့တွေမှ တိုင်းပြည်ချစ်သတဲ့ .. နိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်သတဲ့…
အော်… သနားပြီးရင်းသနားရပါလား… သန်းရွှေတို့ရဲ့ တပ်မတော်ကြီးရယ်…
နောက်ဆိုရင် မိန်းမတွေ ကလေးမမွေးနဲ့ လို့ … စစ်သားတွေပဲ မွေးခိုင်းတော့မယ်….
Posted by ခင်မင်းဇော် at 7:30 PM 1 comment:
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၃ လပြည့်တော့မယ် ဆိုတော့ သူများတွေ ရေးတဲ့ ခံစားချက်တွေ ဝေဖန်ချက်တွေ လိုက်ဖတ်ပြီး ကိုယ်လဲ ကိုယ့်အယူအဆလေးတွေကို ရေးချင်လာပါတယ်။တကယ်တော့ နအဖ စွပ်စွဲသလို အပြင်က လူတွေ လုပ်လို့ ဒီရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာကိုတော့ မထောက်ခံနိုင်ပါဘူး။သူတို့ ပြောသလို ဒီလို လူထုအုံကြွမှုဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ရင် ခုလို အခြေအနေနဲ့ ဘယ်အရပ်ခံမလဲ။ လူထုအုံကြွပြီးရင် ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာ စီမံကိန်းတွေ ဆွဲပြီးသားရှိနေမှာမို့ တဆင့်ပြီး တဆင့် တက်သွားဖို့သာ ရှိတော့မပေါ့။ ခုတော့ ဒီဖက်က ပြည်ပကလူတွေလဲ အရှိန်မြန်လွန်းတဲ့ လူထုတိုက်ပွဲမှာ ဘယ်လို ပေါင်းစပ်ရမယ် ဆိုတာကို စီမံကိန်းမဆွဲရသေးခင်၊ (ဆွဲပြီးသားလဲ မရှိဘူး ထင်ပါ့။) မပေါင်းစပ်နိုင်ပဲ ဒါ့ထက်အဆင့်မြင့်ဖို့လဲ ပံ့ပိုးမှုမလုပ်နိုင်ခဲ့ပဲ ကြည့်နေလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ပြည်သူတွေကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့ ဆင်းရဲကျပ်တည်းမှုကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရုန်းကန်တိုက်ပွဲ ၀င်လိုက်တာပါပဲ။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ရှေ့တန်းက အနစ်နာခံ လမ်းပြနိုင်မှုတွေက နည်းလို့လား။ အဲဒီ ၈၈ မျိုးဆက်တွေကိုလည်း ပြည်ပကလူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာ ကုန်ရောပဲ ။ဒီလူနဲ့ ဒီလူတွေဆိုတာကလည်း ၈၈ ကတည်းက အတူတူလုပ်လာခဲ့တယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေကို တိုက်ချင်စိတ်က တထပ်တည်း။ ဒီတော့ ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ တားဆီးထားထား အာဏာရှင်ကို တိုက်ရမဲ့ တိုက်ပွဲနည်းနာတွေကို စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ ဆင်တူုတာတွေ ထပ်တူညီတာတွေ ရှိနေမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုလူစားတွေကို ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ တိုက်ရတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေး စိတ်မ၀င်စားတဲ့လူတွေတောင် သိနေတာပဲ။
ဒီ(၃) လအတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးထားတာတွေကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အတင်းချိတ်ဆက် ဇာတ်လမ်းဆင်၊ နောက် ဘာဆိုဘာမှ အကြမ်းမဖက်ပဲ မေတ္တာပို့လမ်းလျှောက်နေတာ သိရက်နဲ့ အကြမ်းဖက် ဆူပူရန်ကြံစည်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည်ကြီးတွေ ချပြီး တရားစီရင်သတဲ့။ တရားဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ မည်သူမှမရှိစေရတဲ့။ သူတို့ပဲ ရှိနေရမှာပေါ့။ ပြီးတော့ ဥပဒေနဲ့အကြုံးမ၀င်လဲ အတင်းအမိန့်ချခိုင်း တရားသူကြီးက သူတို့ ပေးလိုက်တဲ့ စာအိတ်ကို တရားခွင်မှာ ဖွင့်ဖတ်ပြရသူပဲ၊ (ဒါကလည်း ကိုယ်တွေ့)သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်နေတဲ့လူတွေက သူတို့ကို ပြန်လှန် အကြမ်းဖက်ရန်ကြံစည်မှု၊ ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ ဖမ်းဆီး ထားတဲ့ သက်သေခံ လက်နက်တွေကလည်း အံ့သြလောက်ဖွယ် လောက်လေးဂွတွေ ။ ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေ မမြင်ဖူးလို့ တချို့ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေဆို မျက်လုံးအပြူးသားလေးနဲ့ သေချာ ကြည့်နေတာကိုလည်း MRTV က သေချာ ရိုက်ပြလိုက်သေး။ အော် သနားစရာလေးတွေ။ လောက်လေးဂွဆိုတာ နောက်ဆုံးပေါ် ၊လူကို မထိခင်ကတည်းက သေစေနိုင်တဲ့ လက်နက် ။ မမြင်ဖူးရင်သေချာ ကြည့်ထားဆိုတဲ့ အထာနဲ့။
မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်နေတဲ့ ဦးကျော်ဆန်းတို့ တစုလည်း မေ့တတ်တာလွန်ပါလေရော။ လေလှိုင်းထဲက လူသတ်သမားဆိုပြီး စွပ်စွဲတဲ့အထဲမှာ DVB ဘာ့ကြောင့်မပါခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေ့ကျန်ခဲ့လို့တဲ့။ အမှန်တကယ်က နိုင်ငံခြားသားတွေ ဦးစီး ဦးဆောင် လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြား မီဒီယာတွေကိုသာ သတိပြုစရာ၊ ဂရုစိုက်စရာ လို့ သူတို့က သဘောထားတယ်ဆိုတဲ့ စတိုင်နဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံတွေ ဦးစီးလုပ်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံကို ရှိတယ်လို့ စာရင်းထဲတောင် မထည့်ပဲ ထားပြခဲ့တာပါ။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ မေ့ဖို့နေနေသာသာ ၊ အမှုန့်ကြိတ်ပစ်ချင်လွန်းလို့ DVB လွှင့်သမျှ လှိုင်းတွေကို အဆမတန်ဈေးပိုပေးပြီး လိုက်ဝယ်နေတာ မသိတာမှတ်လို့။
နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကြီးတဲ့၊ ပြန်ကြားရေးဌာနက ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလအတွင်း သေဆုံးသူဦးရေမှာ ဂမ်ဘာရီကိုပြောတော့ တမျိုး၊ ပီညဲရိုးကို ပြောတော့တမျိုး။ အဲဒါကို သတင်းထောက်က ထောက်မေးလိုက်တော့ ဟဲဟဲ… ဟိုဟာက ဒီလို ဒီဟာက ဟိုလို တဲ့…။မထင်မှတ်တဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေ ရိုက်ယူထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ဗွီဒီယိုတွေက ပလူပျံလို့ စစ်အုပ်စု ရဲ့ ရက်စက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာမို့ နိုင်ငံတကာမှာ အံ့သြမင်သက်ခဲ့ရတယ်။ တကယ်တော့ နအဖဟာ ယုတ်မာတဲ့ နေရာမှာ တော်တယ်။ အာဏာလက်ဆုပ် မဖြည်တဲ့နေရာမှာတော်တယ်။ လိမ်လည် သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာ တော်တယ်။ နောက်ဆုံး ငရဲမကြောက် နိုင်လောက်အောင် တော်ပါပေတယ်။
ကျမတို့ဘက်ကတော့ ကဗျာဆရာကိုအောင်ဝေး ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။
သေချာ ပြန်စဉ်းစားတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ စစ်သားလေးသိန်းဆိုတာမှာတောင် အောက်ခြေ စစ်သားတွေက အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေထဲမှာ ပြည်တွင်းက စစ်အုပ်စုတွေရဲ့ စောင့်ကြည့် အကျဉ်းချ ခံထားရသူတွေမပါပဲ၊ ကလေးသူငယ် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမပါပဲ။ နောက်ဆုံးစကားကုန်ပြောရရင် အခု ထိုင်းမှာ လာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သား ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတောင် နှစ်သန်းကျော်ရှိနေတာပဲ။ ဒီလူတွေနဲ့ ခုနစစ်သားလေးသိန်းကို ဖိသတ်ရင်တောင် သေနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိနေတာပဲ။ ကျမတို့ လူ့အခွင့်အရေးကို နားမလည်။ လူ့စကားနားမလည်။ ငါ့ဖို့ ငါ့အာဏာ ငါ့စည်းစိမ် ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးက သယံဇာတတွေကို ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားနေတဲ့ ဒီလို စစ်အုပ်စုတွေကို လက်ဝါးဖြန့်တောင်း ၊ မေတ္တာပို့တောင်း၊ စကားထိုင်ပြောဖို့ တောင်းနေလို့ မရတော့ဘူးထင်ပါတယ်။
ကျမတို့ သိခဲ့တဲ့ ကတ္တီပါတော်လှန်ရေးတို့ နှင်းဆီတော်လှန်ရေးတို့ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဒီစစ်အာဏာရှင်ကို အကြမ်းမဖက် လူထုနည်းနဲ့ မတောင်းပါနဲ့တော့ ။ ဒီနည်းတွေနဲ့ သေသူသေ။ ဘ၀ပျက်သူတွေပျက် ၊ မျိုးဆက်တွေ စတေးခံထားရတာလဲ ထည့်တွက်ကြပါဦး။ ပြည်သူတွေ အထိနာမှာ စိုးရိမ်လို့ သွေးထွက်သံယိုမှုတွေကို စိုးရိမ်လို့ ဆိုပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဒီသွေးထွက်သံယို ကျဆုံးမှုတွေနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်နေရတာပဲ မဟုတ်လား။
ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျမတို့နိုင်ငံက ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတို့ ဆိုတာက တကယ့် ဘာသာသာသနာရဲ့ ၀န်ထမ်း။ အလေးအမြတ်ပြုရာ ဘုရားသားတော်တွေက ဘာလက်နက်မှမပါ လမ်းလျှောက် မေတ္တာပို့ခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ဘုရားသားတော်တွေ ရဲ့ မေတ္တာလက်နက်ကို ပြည်သူလူထုက လက်တွဲ အားဖြည့်ခဲ့တယ်။ ဘယ်မှာလဲ အကြမ်းဖက်မှု အရိပ်အယောင်။ ပြည်သူတွေပါခဲ့တယ် ဆိုရာမှာလဲ တကယ့်ကို ဘယ်သူတဦးတယောက်မှ တိုက်တွန်းချက်၊ မြှုဆွယ်ချက်တွေ မပါဘုး၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေမပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆိုတာကို အပြည့်အ၀ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ လူထု ဆန္ဒပြခဲ့တာစစ်စစ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလို သာသနာ့ဝန်ထမ်း ဘာသာရေး သီးသန့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာ ကျမတသက်တော့ မတွေ့ခဲ့ဘူး မကြားခဲ့ဘူးပါ။
(အကြမ်းမဖက် လူထုလှုပ်ရှားမှု) ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ကျမတို့ အလေးအမြတ်ပြုရာ ဘုရား သားတော်တွေ အသတ်ခံရ၊ ထောင်ချခံရ၊ အနိမ့်ဆုံး ၀ါတ၀ါ ပျက်ခဲ့ရ။ ကျောင်းသားလူငယ် ထောက်ခံ အားပေးသူ ပြည်သူတွေ ဖမ်းဆီးထောင်ချ ခြိမ်းခြောက်။ တင်းကျပ် ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျမတို့ရဲ့ အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုက သွေးချောင်းစီးခဲ့ရတယ်။ အသက်ပေးခဲ့ရတယ်။ အနှစ်ပြန်ချုပ်ရရင် အာဏာရှင်တွေနဲ့ တိုက်တဲ့ပွဲမှာတော့ တိုက်ပွဲ နည်းနာကို ကိုယ်ကရွေးချယ်လို့ မရတော့ဘူး။ သူရွေးချယ်ထားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ကျမတို့က ပြန်လှန်တော်လှန်ရမှာပဲ။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 8:32 PM 1 comment:
အလုပ်တွေ ပိနေပြီး စာမရေးနိုင် ဖြစ်နေချိန်မှာ အချိန်ကလေးရတိုင်းးကိုယ့်ဘလော့ကို ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်တာ ၂ ပတ်ကျော်တော့ မနေနိုင်တော့ဘူး။ တကယ်တော့ ကိုယ့်လိုပဲ လူတိုင်း စားဝတ်နေရေး ရုန်းကန်ရင်းကပဲ ပို့စ်အသစ်တွေ တင်နေတာပဲ ။ မတူတာဆိုလို့ ကိုယ်က ဒီကွန်ပျုတာ ကို ဗွီဒီယို ဖိုင်တွေ အက်ဒစ်လုပ်ရင်း၊ ဖိုင်ဖွဲ့ရင်း စာရေးတဲ့အခါ အရမ်းအခက်အခဲ ဖြစ်တာ တခုပဲ ကွာမယ်ထင်ပါရဲ့။
ခုရက်တွေမှာတော့ .. ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီး ရှိနေပြီး ရေးဖို့ အချိန်မလောက်တာက အဓိက ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်မွေးနေ့ ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့၊ ကလေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပပျောက်ရေးနေ့စတဲ့ အခမ်းအနားတွေ ဆက်တိုက်ကို ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပဲနဲ့ နောက်ကွယ်တာဝန်တွေက ကိုယ့်ကို ဖိစီးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို ထမင်းကျွေးတဲ့အလုပ်နဲ့ ကိုယ်က ကူညီရတဲ့ အလုပ်တွေကို မျှတအောင် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်နေရတဲ့အခါ အချိန်မရှိဘူး လို့ ညည်းတဲ့လူတွေကို သတိရသွားမိတယ်။ အချိန်ဆိုတာ ယူရင်ရပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ကျမတော့ အိပ်ချိန်တွေက မနက် ၂ နာရီ ၊ အိပ်ရာထချိန် မနက် ၆ နာရီတွေမှာ မူးချာလည်ခဲ့ရတော့တယ်။ ဒီနေ့ နောက်ဆုံး ။ ခု မနက် နောက်ဆုံးဆိုတဲ့ လောဆော်သံတွေ ကြားမှာ ကွန်ပျုတာကို ခိုင်းနေရတာ စိတ်မရှည်ချင်စရာ.. ကွန်ပျုတာကတော့ သူ့အလုပ်ကို သူ့သတ်မှတ်ချိန်နဲ့ လုပ်ပေးနေတာပဲ.. ကိုယ်ကသာ စိတ်လောနေမိတာကိုး..
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် အသက် ၄၈ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲ မှာ gay တွေ မယ်ပြိုင်ပွဲလုပ်တာ…
(အဲဒါကတော့ တကယ်ကြည့်လို့ ကောင်းခဲ့တယ်)
နောက် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲကို ကျောင်းသားတပ်မတော် (သြစတေးလျ ဌာနခွဲ) က ကျင်းပတာမှာ ကလေးတွေက ကိုယ့်ထက်တောင် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ သိနေတာ..
ထူးခြားဆုံးက ပထမ ရတဲ့ ကလေးရဲ့ စာစီစာကုံး ကို ဒိုင်လုပ်သူတွေအားလုံးက တညီတညာတည်း အမှတ်အမြင့်ဆုံးပေးခဲ့တဲ့ထိ ကောင်းခဲ့တာ..
စာစီစာကုံး ပိုင်ရှင်ကလေးက (၆) တန်းကျောင်းသား ငယ်ငယ်လေး ဖြစ်နေတာ..
(ဒုတိယက ၁၁ တန်း၊ တတိယက ၉ တန်း)
နောက် အဲဒီ ပထမရတဲ့ စာစီစာကုံးတအုပ်ထဲ ရွေးပျောက်သွားခဲ့တာ… (အဲဒါအရမ်းထူးဆန်းနေတယ်)
ကလေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ပပျောက်ရေးနေ့မှာ ကိုယ်တိုင် ၅ နှစ်သားလေးနဲ့ ဘန်ကောက်မှာအရောင်းခံခဲ့ရတဲ့ (ခု အသက် ၁၂ နှစ်လောက်ရှိတဲ့) ကလေးနဲ့ အင်တာဗျုးရင်း မျက်ရည်စို့ခဲ့ရတာ..
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ လွတ်မြောက်နယ်မြေက ထွက်တဲ့ (Saffron Revolution) အခွေမှာ အမိန့်ပေးနေတဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးကို သေချာ ရိုက်ပြထားနိုင်တာ…
လူတွေက ဘာ့ကြောင့် လူ့ကျင့်ဝတ်တွေကို သိပ်ဂရုမစိုက်တော့တာလဲ..
ဘ၀တွေက ဘာတွေများ ထူးခြားဦးမှာလဲ…
ကိုယ်တိုင်ရော ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘာတွေများ ပြောင်းလဲအောင် ပဲ့ကိုင် နိုင်မှာလဲ..
ရေးချင်တဲ့စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်တော့ အလုပ်တွေ တကြော ရှင်းတော့မယ် ထင်ပါရဲ့…….
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:20 AM No comments: